'लकडाउन खुकुलो बने पनि बेलायत कोरोनामुक्त भइसकेको छैन' : डा. निर्मल अर्याल - Himalayamail.com
बेलायतमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास कम हुँदै जाँदा सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गइरहेको छ । विद्यालयका केही कक्षा, पसलहरु खुल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा के के कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर हाल बोर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा आवद्ध जनस्वास्थ्यविद् डा.निर्मल अर्यालसित गरिएको कुराकानीः
बेलायतमा लकडाउन खुल्दै जान लागेको छ । सरकारले एलर्ट लेभेल घटाएर ३ मा झारेको छ। यसको मतलब हामी पहिले जति सावधान हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
बेलायतमा सरकारले एलर्ट लेभल घटाएर ३ मा झारेको छ । यसको अर्थ कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भइसकिएको भन्ने होइन । समुदायमा संक्रमण सामान्य तहमा रहेको छ तर द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छैन भन्ने यसको मुख्य सन्देश हो । स्थानीयरुपमा फेरि संक्रमण फैलिन सक्ने कुरामा भने सचेत रहनुपर्छ । जस्तै लेस्टरमा हालै एक्कासी धेरैजनामा संक्रमण देखिएको थियो । यस्तो अवस्था भने आउन सक्छ ।
बाहिर हिँड्दा मास्कसंगै पन्जा लगाउनु आवश्यक छ कि छैन ?
विभिन्न देशमा भएको अध्ययनपछि पछिल्लो वैज्ञानिक तथ्यले मास्कले संक्रमणबाट जोगाउन सक्ने पाइएको छ । तसर्थ सम्भव भएसम्म मास्क लगाउँदा संक्रमणको खतरा कम रहन सक्छ । बेलायतमा बसभित्र मास्क अनिवार्य गरिएको कारण पनि यहीं हो । विशेषतः भीडभाड हुने ठाउँमा मास्क लगाउँदा राम्रो हुन्छ । धेरै ठाउँमा छुँदै हिंड्दा पन्जाले संक्रमण फैलाउन सक्ने भएकोले वैज्ञानिकहरुले बाहिर हिंड्दा पन्जा नलगाउन सुझाएका छन् । सामाजिक दूरी कायम गर्ने र २० सेकेन्डसम्म मिचेर हात धुनु नै उपयुक्त सावधानी मानिएको छ ।
सिल्डिङमा बसेकाहरुलाई पनि बाहिरफेर गर्न अनुमति दिइएको छ । उनीहरुले के कुरामा सजग हुनुपर्ला ?
बेलायत सरकारले सिल्डिङमा बस्नुपर्ने उच्च जोखिममा रहेकाहरुलाई घरमा पत्र पठाएको छ । पछिल्लो निर्देशिकामा उहाँहरुलाई बाहिर घुम्न जान अनुमति दिएको छ । तर बाहिर जाँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने कुरामा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनुपर्छ । घरकै सदस्यसँग मात्र बाहिर जाने, एक्लै बस्नेहरुको लागि बाहिरको एक जनासँग मात्र जाने र हरेक पटक सोही व्यक्तिसँग मात्र जाने, जमघटमा नजाने र कोरोनाको लक्ष्ण भएकाहरुसँग नभेट्ने कुरामा सजग रहनुपर्दछ ।
धेरै समय घरभित्रै बसेकाले होला अहिले धेरै मानिसहरु पार्कतिर, समुद्री किनारतिर घरमै पनि आफन्त साथीभाइ बोलाएर सामाजिक दुरी पनि कायम नगरी बार्बीक्यु गर्न थालेका छन् । के यसो गर्दा पनि हुने बेला आइसकेको हो र ?
समुदायमा संक्रमणको विस्तार र दर कम हुँदै गएपछि सरकारले पनि सामाजिक गतिविधिलाई खुकुलो पारेको छ । सरकारले तोकिएको मापदण्ड अनुसार जमघट गर्न सकिन्छ । इग्ल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा फरक घरका ६ जना सम्मलाई भेला हुन दिइएको छ भने स्कटल्याण्डमा तीनवटा घरबाट बढीमा आठ जनालाई र वेल्समा दुई घरको सबै सदस्यलाई पनि जमघट गर्न दिइएको छ । स्कटल्याण्ड र वेल्समा घरभन्दा ५ माइल टाढा जान दिइएको छैन भने इग्ल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा त्यस्तो छेकबार छैन । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा यी सबै ठाउँहरुमा जमघट हुनेले दुई मिटरको सामाजिक दूरी भने कायम गर्नुपर्दछ ।
सरकारले ल्याएको ‘ट्रयाकिङ’ र ‘ट्रेसिङ्ग’ योजनाले कसरी काम गर्छ ?
सरकारले मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरी ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ्गलाई छिटो र प्रभावकारी गराउने घोषणा गत मे महिनामै गरेको थियो । तर विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा अझै लागू हुन सकेको छैन । हाल सम्बन्धित कोरोना पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिलाई सोधखोज गरेर नै ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ्गको काम भइरहेको छ । मोबाइल एप्लिकेसनले कोरोना पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिसँग विगत चार हप्ता निकट रहेकाहरुलाई सूचना दिने र आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने वा नपर्ने जनाउ दिने किसिमले बनाउन लागिएको छ । मोबाइलको ब्लुटुथको उपयोगले यो पत्ता लगाउने प्रारम्भिक योजना हो । गुगल, एप्पल लगायतका कम्पनीले यसमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
दोस्रो वेभको धेरैले कुरा गर्छन् । यसको सम्भावना कत्तिको छ ? आइहालेमा यो कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
समयमै संक्रमित र उनीहरुसँग निकट रहेकाहरुको पहिचान हुनसकेमा दोश्रो वेभको सम्भावना नहुन सक्छ । स्थानीय तहमा आउटब्रेक देखिहाले पनि अन्य स्थानमा नफैलिन सक्छ र स्थानीय लकडाउनको माध्यमबाट संक्रमण विस्तारलाई रोक्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियाले फेरि संक्रमण देखिएपछि स्थानीयरुपमा लकडाउन गरेर नियन्त्रण गरेको थियो । दोश्रो वेभ आइहालेमा यो कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । बेलायतमा करिब पाँच प्रतिशत नागरिकमा पोजिटिभ संक्रमण देखिएकोले हर्ड इम्युनिटी विकास भएको भन्ने अवस्था पनि छैन । केही वैज्ञानिकहरुले भाइरस कमजोर हुनसक्ने बताएपनि ठोस प्रमाण भेटिएको छैन । बेलायतले यस अवधिमा धेरै तयारी गरेकोले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि गम्भीर नभएसम्म घरमै बस्नुपर्ने र टेष्ट नहुनेजस्तो अवस्था भने नआउन सक्छ ।
काममा जाँदा, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नु परेमा, के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला ?
सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा मास्क लगाउने, नियमित हात धुने, सकभर सामाजिक दूरी राख्ने जस्ता कार्य नै प्रमुख सावधानीको उपाय हुन् ।
छोरा, छोरीलाई स्कूलले बोलायो भने पठाउन उपयुक्त होला कि नहोला ?
बेलायत सरकारले स्कूलमा संचालन निर्णयमा विशेष सावधानी अपनाएको जस्तो लाग्छ । केही कक्षाहरु (रिसेप्सन, इयर १,६, १०, १२) बाहेक अरु सेप्टेम्बरबाट मात्र खुल्ने जनाएको छ । स्कूलमा संक्रमणको खतरा निकै कम भएपनि हुँदै नभएको भने होइन। अभिभावकहरुलाई पनि छोराछोरी पठाउनै पर्ने अनिवार्य गरिएको छैन। सरकारको निर्देशिका अनुसार नै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ जस्तो लाग्छ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो , बेलायत र नेपालमा कडा नियमहरु लागु
सलमानको 'बिग बोस-१४' कोरोनाको कहर बाबजुद अक्टोबरदेखि प्रशारण हुने
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहकार्य कोरोनाको एस्ट्राजेनेका खोप यसैवर्ष आउन सम्भव
नेपालमा निर्वाचन धाँधलीरहित गराए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ : पूर्वराष्ट्रपति डा यादव
कोरोनाको कारण पत्रकारहरु प्रभावित, परम्परागत मिडियाको भविष्यमाथि प्रश्न